Umklomelo Wokuqala Wamahlaya We-Planeta DeAgostini | Izincwadi Zamanje
IPlanethi iDeAgostini ubiza owakho Umklomelo Wokuqala Wamahlaya Omhlaba Wonke ngenhloso yokukhuthaza ukwenziwa kwamaphrojekthi asezingeni eliphakeme emkhakheni wamahlaya. Iphrojekthi ewinile izoshicilelwa yiPlaneta DeAgostini Cómics futhi izonikezwa umklomelo wama-euro angama-20.000 XNUMX.
El umnqamulajuqu wokuthola yemisebenzi Uzoqala ngoJulayi 30 uphele ngoNovemba 15.
Ngenxa yomncintiswano wamazwe omhlaba, imisebenzi ingabhalwa ngeSpanishi, isiNgisi, isiFulentshi noma isiNtaliyane; futhi ube namakhasi ubuncane abangama-46. Ngezansi ungathola imithetho yomncintiswano, ezophinde ihlale ithunyelwe kuwebhusayithi yethu.
UMKLOMELO WOKUQALA WOMHLABA WAMAKHAYA WAMAKHAYA
I-Editorial Planeta DeAgostini, SA, ngenhloso yokukhuthaza amaphrojekthi wamahlaya omhlaba wonke wezinga eliphezulu lokuqhafaza nokulandisa, imemezela Umklomelo Wayo Wamahlaya Wokuqala We-Planeta DeAgostini, isimemezelo saso esizophathwa ngokwezisekelo ezilandelayo:
1.- Noma yimuphi umuntu wanoma yiliphi izwe angahlanganyela kulo mncintiswano. Uma kwenzeka ukuthi umhlanganyeli abe mncane engakhululwanga ezweni lakubo, ukugunyazwa okucacile okuvela kubameli bezomthetho (ababheki / abazali) kumele kufakwe ukuze babambe iqhaza kulo mklomelo kanye nokuzibophezela ekusayineni isivumelwano sokunikezwa. amalungelo omsebenzi, uma kwenzeka kuwukuthi uwine.
2. - Kungalethwa iphrojekthi eyenziwe ngumbhali oyedwa noma ngamalungu ambalwa amalungu, imisebenzi yabo ihlukaniswe phakathi kwababhali besikripthi, abalingisi bezithombe, izinki kanye nababalayo, abazothathwa njengababhali ngokubambisana.
Ababhali noma ababhali ababambisene ababambe iqhaza kulo mklomelo bathembisa ukungalethi iphrojekthi yabo kweminye imincintiswano kuze kwaziwe ukuthi lokhu kwehluleka.
Amaphrojekthi womsebenzi azokwethulwa ngalo mklomelo kumele ahlangabezane nalezi zidingo ezilandelayo:
- Imisebenzi ebhalwe nganoma yiluphi kulezi zilimi: iSpanishi, isiNgisi, isiFulentshi noma isiNtaliyane.
- Imisebenzi yangempela futhi engashicilelwe, okungukuthi, ayishicilelwanga encwadini, ngogesi, nge-inthanethi noma ngefomethi eyenziwe nge-serial kumamagazini.
- Imisebenzi enganikwanga kweminye imincintiswano noma ngenqubo yokwehluleka kweminye imincintiswano.
- Isitayela, ukwelashwa nezinhlobo zemisebenzi kuzoba mahhala ngokuphelele.
- Munye umsebenzi ongalethwa ngumbhali ngamunye noma ababambisene naye.
- Imisebenzi kufanele ibe namakhasi okungenani angama-46 ohlangothini olulodwa lwemichilo yamahlaya, lapho kungekho khona okuphezulu.
IGUNYA, UKUQALA NOKUDALULA UMSEBENZI:
Ukubamba iqhaza emncintiswaneni kusho ulwazi nokwamukela le mithetho, kanye noku:
• Isiqinisekiso sombambiqhaza, nesibambiso esigcwele se-Editorial Planeta DeAgostini, SA, sokubhalwa nokuqalwa komsebenzi owethulwayo nokuthi akuyona ikhophi noma ukuguqulwa ngokwengxenye noma okuphelele kwawo wonke umsebenzi wawo noma owabanye.
• Isiqinisekiso salowo obambe iqhaza, ngenhlawulo ephelele ye-Editorial Planeta DeAgostini, SA, yesimo esingashicilelwanga somsebenzi owethulwe emhlabeni wonke nobunikazi obukhethekile ngaphandle kokubiza noma ukulinganiselwa kwawo wonke amalungelo okuxhashazwa emsebenzini.
• Imvume yalowo obambe iqhaza ekwakhiweni kabusha, ukusatshalaliswa kanye nokuxhumana komphakathi ngomsebenzi owethulwe uma kwenzeka unikezwa.
6.- Okwangempela ngeke kwamukelwe, amakhophi kuphela ngosayizi we-DIN A4, akhombisa ephepheni elehlukile igama lomlobi noma amagama ababhali ababambisene nabo nemininingwane yokuxhumana (ikheli, ucingo kanye ne-imeyili).
7.- Kuyadingeka ukuthi kufakwe ikhophi kamazisi esemthethweni kazwelonke evela ezweni ahlala kulo umbhali noma ababambisene nabo. Endabeni yokuba mncane noma engakhululiwe ezweni ahlala kulo, abameli bezomthetho kufanele futhi bethule ikhophi kamazisi kazwelonke.
8.- Ukuhlolwa okulungile kwephrojekthi, amazwibela aphelele adingeka kumakhasi amabili abhalwe ngeSpanishi, isiNgisi, isiFulentshi noma isiNtaliyane, kanye namakhasi okungenani ayisishiyagalombili emichilo yamahlaya eseqedile ngombhalo wayo ohambisanayo.
9. - Imiklamo yokusebenza, ngefomethi ekhonjisiwe kanye nedatha nemibhalo echazwe kumaphoyinti 5, 6 no-7 ngenhla, izothunyelwa ku-Planeta DeAgostini Cómics kwimvilophu evaliwe, ekhombisa okufanayo "Umklomelo Wokuqala Wamazwe Omhlaba we-Planeta DeAgostini IComic ”, ekhelini leposi elilandelayo:
"I-Planeta DeAgostini Cómics", i-Avda. Idayagonali, 662 - 664, 3º - 08034 yaseBarcelona.
10. - Ophumelele uzoklonyeliswa ngomsebenzi obhekwa njengowunamandla amakhulu ngokwamavoti amajaji. Umklomelo uhilela ukushicilelwa komsebenzi futhi unikezwe ama-EUROS AMAKHULU AMASHUMI AMABILI (ama-euro ayi-20.000.- ama-euro), akhokhelwe izingxenye ezimbili, ama-30% lapho kusayinwa inkontileka ehambisanayo yokushicilela kanye nama-70% ekufikeni kokugcina kwalokho okuzoshicilelwa. Inani lomklomelo lincike emithethweni yamanje ephathelene nokubanjwa okukhonjiswe yimithethonqubo yentela. Leli nani lithathwa njengelihamba phambili lobunikazi obenziwe umsebenzi.
11. - I-Planeta DeAgostini, SA (Amahlaya) okuHlola, ayoba nawo wonke amalungelo okuxhashazwa emsebenzini emhlabeni wonke iminyaka eyishumi.
12.- I-Planeta DeAgostini, i-SA (Amahlaya) i-Resource inelungelo lokuxoxisana nabanye ababhali abangaklonyelisiwe ukuthi bangashicilela yini imisebenzi yabo, uma kungokwentando yomshicileli.
UKwabiwa Kwamalungelo Okuxhashazwa
13. - Ukunikezwa komklomelo kusho ukuthi umbhali oklonyelisiwe noma ababhali ababambisene nabo babela kuphela i-Editorial Planeta DeAgostini, SA wonke amalungelo okuxhashazwa komsebenzi, kuwo wonke amazwe nakuzo zonke izilimi zomhlaba, kanye wonke amalungelo wokuhlela kuyo yonke imidiya.
Umbhali owine umklomelo noma ababambisene nabo babophezelekile ukuthi basayine inkontileka yokushicilela noma izinkontileka futhi badlulisele amalungelo okuxhashazwa kuphela kumshicileli womsebenzi owunikiwe esikhathini esingangenyanga esisodwa kusukela ekunikezelweni komklomelo.
14.- Ijaji lizokwakhiwa ngochwepheshe abavela emkhakheni wamahlaya abakhethwe ngokukhululeka yi-Editorial Planeta DeAgostini, SA, bobabili emkhakheni wezokudalwa, kanye nokushicilela nokugxeka. Uhlelo lokuthola iziqu, ukukhethwa kanye nokuvotelwa kwemisebenzi eveziwe luzosungulwa yi-Editorial Planeta DeAgostini, SA. Izingxoxo zejaji zizoba yimfihlo. Isinqumo sokugcina sizokwamukelwa yiningi elilula.
15. - Isikhathi sokwamukelwa kwamaphrojekthi wemisebenzi sizoqala ngoJulayi 30, 2008 futhi sizophela ngoNovemba 15, 2008. Kuzoqondakala ukuthi leyo misebenzi enosuku lokungena ePosini ngomhla ka-15 kuNovemba 2008 .
16. - Isinqumo sejaji, esizoba sesokugcina, sizomenyezelwa ekupheleni kukaJanuwari 2009, kuwebhusayithi yenkampani ethi www.planetadeagostinicomics.com (kanye / noma emcimbini womphakathi).
Umklomelo ungathiwa awunalutho
Umsebenzi wokuwina olungele ukushicilelwa kufanele walethwe uwonke (ingaphakathi nesembozo) ngumbhali noma ababambisene naye ngaphambi kukaJulayi 17, 1, bewushicilela ngaphambi kokuphela kuka-2009.
18. - Amakhophi emisebenzi enganikiwe ngeke abuyiswe, futhi angacekelwa phansi ekugcineni kwenqubo yomncintiswano.
19.- Kunoma ikuphi ukungabaza okungavela ekuchazweni kwalo mbhalo noma kunoma yiluphi udaba lwamacala okuvela kuwo, amaqembu aletha igunya kanye namandla ezinkantolo neziNkantolo zaseBarcelona, ​​eshiya ngokusobala noma yimuphi omunye umthetho ongahambelana kubo.
20. - Le mithetho ifakwa kwi-Notary Public of the Illustrious College of Catalonia, uDon Mariano Gimeno V.-Gamazo, ukuqinisekisa ababambiqhaza.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Imincintiswano Nemiklomelo » Umklomelo Wokuqala Wamahlaya WasePlaneta DeAgostini